SAWIRO Taliyaha Ciidanka Booliska oo Musuqmaasuq baahsan ka bilaabay CID. – hogaanka.org
SHAQO ABUURKA DHALINYARADA IYO TECHNOLOGY
Taliyahaasi ay sheegayaan waa ka Somaliya ee sidaa ula socda
Sunday December 15, 2019 – 19:24:32
by Xaaji Faysal
Dadka ayaa saf dheer u gala in la’ sawiro sida aad ku aragtaan Sawirka kore,
Taliyaha Ciidanka Booliska soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa Xarunta CID ka dhex furtay Foto si qasab ah loogu sawiro dadka doonaya inay samaystaan warqada dambi la`aanta ee lagu sameeyo CID.
Footada oo uu u bixiyey Safaari ayaa ah qol jiingad ah oo uu ka dhex dhistay Xarunta CID waxaana qofkii la sawirayo laga qaadaa lacag dhan 3 Dollar halka Footooyinka Magaalada ay qaataan 1 Dollar sida ay ii xaqiijiyeen dad kala duwan oo warqada dambi la`aanta ka doontay CID.
waxaa lagu qasbay dadka inaysan iska soo sawirin meel kale, waxaana dhacday in dad badan laga jeexjeexay Sawiradii ay wateen laguna qasaby inay iska dhex sawiraan Footada Taliyaha Booliska ayuu ii sheegay qof magaciisa sababo jira awgeed u codasady inaan magaciisa la xusin.
sababo jira awgeed u codasady inaan magaciisa la xusin.
Sawirada Laga soo qaato Footada Taliyaha Waxaa lagu soo ridayaa Baqshad uu ku dhegan yahay Tiimbaraha ama Shaabada Footada sida sawirka kore idin kaga muuqata,
Dadka ayaa saf dheer u gala in la sawiro sida aad ku aragtaan Sawirka kore, waxaana ay dhibaato ku qabaan in safka dheer iyo lacag qaaliga ah ee Footada Taliye Xijaar ee sida sandulaha ah loogu sawiro.
dhinaca kale waxaa jira Maqaayad laga dhex furay Xarunta CID lana sheegay inuu wax ku leeyahay Taliye Xijaar inkastoo dadka warqadaha u doonta CID aan lagu qasbin inay ka quraacdaan ama ay ka qadeeyaan haddii ay doonayaan in warqada ay helaan, waana wax dhici kara in dadka lagu qasbo cuntada Maqaayadaa, walow arinta maqaayada aysan dadku dhibaato aysan ka sheegan.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa laga doonayaa inay arintan baaritaan ku sameeyaan oo shacabkii ay metalayeen ay ka dul qaadaan Ganacasigan musuqmusaaquqa ah ee awooda ku salaysan ee uu Taliyaha Booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ka bilaabay CID.
Waxaa aan la yaabay warkan ku soo baxay hadhwanaagnews.com ,ee Somaliyadii inoo xayeysiinayeen ee ay ina lahaayeen xafiis dhalinyarada Somaliland qaabilsan baa laga furey soo kuwan hadana naleh dadka ayaa xitaa cuntada iyo sawirada waraaqalaha dawlada lagu dhejinayo ayaa qasab laga iibiyaa.Somaliya oo mucaawimadii caalamka la iskugu geeyey ayaa hadana dadkii lagu dhiigmiiranayaa oo lagu dulaynayaa ninkii Konfurdoonayow nimco Somaliland bay taala oo lawada lee yahay .
MAXAAD SOMALILAND………? Previous
SHAQO ABUURKA DHALINYARADA IYO TECHNOLOGY Next